Inani elikhulu lezithelo ezintsha selivuthiwe, futhi ukukhiqizwa kwezimayini kusadingeka kugxile ezicini ezimbili
Ehlobo, amakhabe nezithelo ezintsha ezinemibala ehlukahlukene zisemakethe, ziletha ukulethwa okwanele kwezinto zokusetshenziswa ezimakethe zezithelo ezijulile. Embonini yokulungisa izithelo ejulile, ujamu ungenye yezingxenye ezinkulu zemakethe. Ujamu omnandi nomuncu, noma ngabe kudliwe ngesinkwa noma kuhlanganiswe neyogathi, kungenza abantu bafune ukudla. Kunezinhlobo eziningi zezimakethe emakethe, kufaka phakathi ujamu we-cherry, ujamu we-sitrobheli, ujamu weblueberry njalonjalo. Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokudla, ukukhiqizwa kwejamu ukwazile ukuzenzekelayo, kepha ukuphepha kokudla kusadinga ukunakwa.
UJam unomlando omude wokwenza ujamu. Esikhathini esedlule, ukwenza ujamu kwakuyindlela yokugcina izithelo isikhathi eside. Kulezi zinsuku, ujamu usuphenduke igatsha elibalulekile lezimakethe zokulungisa izithelo ezijulile. Izibalo ezivela eMnyangweni Wezocwaningo weStatista zikhombisa ukuthengiswa kwamajamu, amajeli namajamu aseCanada ngezigaba amasonto angama-52 aphele ngoJanuwari 6, 2016. Ngalesi sikhathi, ukuthengisa kukaMarmalade kwakucishe kube yizigidi ezingama- $ 13.79.
Ngenkathi isilinganiso sokuthengiswa kwemakethe sikhula, inqubo yokukhiqiza ujamu nayo iyaqhubeka nokuthuthuka. Ikhwalithi yezithelo zokusetshenziswa kungukhiye ekukhiqizeni ujamu. Ngakho-ke, izithelo kufanele zihlungwe ngaphambi kokukhiqizwa. Isithelo sihlungwa ngomshini wokuhlunga ikhwalithi yezithelo, izithelo ezimbi ziyahlungwa, bese kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme zokusetshenziswa ekukhiqizeni.
Ngemuva kokuthi ukuhlungwa kwempahla eluhlaza kuqediwe, kuzofakwa ngokusemthethweni isixhumanisi sokukhiqiza ujamu. Inqubo yokukhiqiza ujamu izodlula ezinyathelweni zokuwashwa kwezithelo, ukusika, ukushaya, ukupheka kwangaphambi kwesikhathi, ukuminyana komshini, ukuwafaka, ukufaka inzalo, njll. Imishini ezenzakalelayo ebandakanyekayo ifaka umshini wokuwasha izithelo, umshini wokusika izithelo, umshini wokugaya, ukupheka ngaphambi umshini, i-concentrator, Umshini wokugcwalisa nokufaka uphawu, ibhodlela lokuvala inzalo, njll. Ngosizo lwale mishini ezenzakalelayo, izinga lokuzenzekelayo ekukhiqizeni ujamu lithuthuke kakhulu, elingaletha abathengi ngekhwalithi ephezulu.
Ngokusho kwezindaba ezikhishwe uhlelo lokuxwayisa olusheshayo lokudla nokondla kwe-European Union muva nje, isosi ethile yamajikijolo yasekhaya eJalimane yehlulekile ngekhwalithi kanye nokuphepha, futhi kuye kwavela izingqweqwe zengilazi kulo mkhiqizo. Abakhiqizi bojamu basekhaya nabo kufanele bakuthathe lokhu njengesixwayiso, balawule ngokuqinile imvelo yokukhiqiza nenqubo yokukhiqiza, futhi bathathe izinyathelo zokuphepha.
Okokuqala, izinkampani kufanele zigweme ukungcoliswa okuvela endaweni yokukhiqiza. Indawo yokusebenzela kumele yakhiwe njengendawo yokusebenzela ehlanzekile ehlangabezana namazinga. Kufanele kubekwe neshawa yomoya emnyango ukuvimbela ukungcola okubangelwa abasebenzi abangena nabaphuma kwi-workshop. Okwesibili, kuyadingeka ukuthi kuhlanzwe ngokuqinile imishini yokukhiqiza, bese usebenzisa uhlelo lokuhlanza lwe-CIP ukuhlanza nokuhlanza imishini yokukhiqiza ngesikhathi ukuvimbela ukungcoliswa kwezinsalela. Ngaphezu kwalokho, ukuhlolwa kwemboni kwemikhiqizo akunakwa. Imishini yokuhlola ikhwalithi yokudla nokuphepha kufanele isetshenziselwe ukuhlola izinto ezahlukahlukene zokuphepha. Isibonelo, imishini yokuhlola umzimba ye-X-ray yangaphandle ingavimbela ukuminyana okuqukethe izingilazi zengilazi ukungena emakethe.
Njengoba abathengi be-post-90s bengena kancane kancane emzimbeni omkhulu wemakethe, imakethe yabathengi yomkhakha wejamu iphinde yavulwa. Kwabakhiqizi bojamu, uma befuna ukwephula ubukhosi bodwa, kudingeka futhi ukuthi basebenzise imishini ehlukahlukene yokuzenzela ukukhulisa izinga lokukhiqiza okuzenzakalelayo, futhi banake kakhulu inhlanzeko yokudla nokuphepha, futhi bathuthukise ukuncintisana okuphelele kwemikhiqizo evela kuzinto eziningi .